दक्षिण ललितपुरकी मोडल निशा भेन्टिलेटरमा पुगेर फर्किइन्, अवस्थामा सुधार « Lalitpur Khabar
दक्षिण ललितपुरकी मोडल निशा भेन्टिलेटरमा पुगेर फर्किइन्, अवस्थामा सुधार
२४ असार ०७८, ललितपुर । नर्भिकका प्रबन्ध निर्देशक मेघा चौधरीले उद्धार गरेकी दक्षिण ललितपुरकी मोडल तथा कलाकार निशा घिमिरेको अवस्थामा सुधार भइरहेको छ ।
बाँकी स्वास्थ्य अवस्थामा लगातार सुधार भइरहेको चिकित्सकहरुले जनाएका छन् । हाल उनलाई सीसीयू वार्डमा राखेर उपचार जारी राखिएको छ ।
नर्भिक अस्पतालले ह्विलचेयर थेरापी, म्युजिक थेरापी लगायतका विभिन्न विधिबाट उनको उपचार गरिरहेको छ ।
अस्पतालमा आउँदा जिउँदो लाशजस्तो रहेकी उनको अवस्था निकै सुधार भएको छ । उनले पछिल्लो समय बोल्ने समेत कोशिश गरिरहेकी छिन् ।
डा. जलानले निशाको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार भइरहेको बताएका छन् । उनले नर्भिकले सकेसम्म सबै विकल्पमा गएर उनको उपचार गरिरहेको समेत बताए । जलानका अनुसार दुर्घटनाका कारण घिमिरेको ब्रेन इञ्जुरी भएको र त्यसको अवस्था निकै जटिल रहेकोले पूर्ण रुपमा नर्मल हुने संभावना भने न्यून छ । ‘उहाँको ब्रेनमा निकै ड्यामेज भएको छ ।’ डा. जलानले भने–‘तर, आएको बेलाको तुलनामा घाउहरु निको हुन थालेका छन् । हामीले डाइट र थेरापीमा फोकस गरेका छौं । प्रोटिन, क्यालोरिजहरु प्रशस्त दिइरहेका छौं ।’